Egwuregwu maka mmepe nke iche n'echiche na ụmụ akwụkwọ ọta akara, ụmụ akwụkwọ na-eto eto, ụmụ akwụkwọ
Nne Nwa na-elekọta ya
Egwuregwu maka mmepe echiche - oge 9 ga-enyere aka ịzụlite àgwà okike
Izi ezi, nzụlite nwatakịrị nke ọma na- atụnye ụtụ n'ịgbatị ọsọ ọsọ ya. Ụmụaka ndị na-adị mfe ịkpọtụrụ, ndị nwere ike ikwupụta echiche ha n'ụzọ ziri ezi, na-eme nke ọma n'ụlọ akwụkwọ. Ihe dị mkpa n'oge mbụ bụ egwuregwu na mmepe nke echiche, nke na-akpali echiche na okwu.
Kedu ihe n'echiche - nkọwa
A na-akpọ echiche echiche ụdị ọrụ uche, nke gụnyere ịmepụta ọnọdụ uche na echiche ndị a na-aghọtaghị. Ụdị ọrụ a dabeere na ahụmahụ ahụmahụ dị na nwa ahụ. Echiche a na-arụsi ọrụ ike na oge ahụ site na 3 ruo 10 afọ. Mgbe ọrụ a gafere n'ụdị mpempe akwụkwọ. Dika nhazi nke di ugbu a, ihe omuma n'eme eme:
Ihe oyiyi ndị ebumpụta ụwa na-adabere na ihe oyiyi na ebe nchekwa na onyinyo nke echiche ziri ezi. Enweghị nchekasị, ọrụ okike agaghị ekwe omume. Ndị niile nwere nkà na ndị maara ihe bụ ndị mere nchọpụta pụrụ iche, mmepụta ihe, dị nnọọ iche. Ihe ka ukwuu n'ime ọrụ nwata ahụ na-eme site na-arụ ọrụ na-aga n'ihu nke ichetụ n'echiche. Ọ bụ ihe ndabere nke nhazi nke mmadụ, ọmụmụ ihe nke ọma ụmụaka.
Kedu otu esi eme ka nwatakiri a chere?
Zụlite echiche nwatakịrị n'ụdị egwuregwu. N'otu oge ahụ, a ghaghị iburu n'uche na a na-ejikọta echiche na iche echiche n'ezoghị ọnụ, n'ihi ya, ọ dị mkpa ka e mepụta ha n'otu ihe. Iji mee nke a, ọ dị gị mkpa ịgụ akwụkwọ ọtụtụ ugboro na ụmụaka, kọọ akụkọ , ma kpọba nwata ahụ na ụwa gbara gị gburugburu. Ị nwere ike ịmalite usoro nke ịmepụta echiche ahụ site na mgbe nwa ahụ malitere ikwu okwu. Mgbe ọ dị afọ 3, ọtụtụ ụmụ okorobịa na-echesi echiche ike n'echiche. A na-ewere afọ a dị ka ihe dị mma maka mmepe nke nwa ahụ.
Ọrụ nke egwuregwu na mmepe nke echiche
A ghaghị iburu n'uche na ihe nwatakịrị ahụ chere bụ ụdị echiche uche, ihe nile ụmụaka na-eme na-ejikọta ya na egwuregwu ahụ mgbe nile. Ụdị nkwurịta okwu a na nwatakịrị ahụ na-emejupụta mkpa ọ dị obere obere ahụ na ihe ọmụma nke ụwa gbara gburugburu. Maka oge mbụ nwa echere nwata ahụ ga-amalite igosipụta onwe ya mgbe ọ na-eji ihe eji eme ihe maka ihe ndị dị adị n'ezie, na-ewere ọrụ ndị mmadụ.
Egwuregwu maka mmepe ngwa ngwa nke iche n'echiche na-eji nwa ahụ elebara 100% anya. Nwatakịrị a dị mfe ịghọta ihe mgbe ị na-egwu egwu, ngwa ngwa na-echeta. N'ihi ya, n'ọdịnihu, ọ gaghị esiri ike ịmepụta ihe ọ hụrụ na mbụ. N'ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ na-enwe echiche nke ọma, enwere ihe ndị na-atụchite anya na-aga n'ihu, ha amalite ịkụ egwu. N'oge a, enwere mgbanwe site n'echiche ahụ na-emepụta ihe.
Egwuregwu maka mmepe nke iche n'echiche na ndị na-achọpụta ihe
Egwuregwu maka mmepe echiche nke ụmụ akwụkwọ ọta akara nwere ọrụ nhazi. Ụmụaka dị 4-5 dị ka ha na-etinye onwe ha n'ọrụ nke onye ọzọ, "na-anwale" ọrụ dị iche iche, na-eche ihe ha ga-achọ ịghọ n'ọdịnihu. Ihe nkuzi ekwesịghị igafe 20-30 nkeji, ka ị ghara ịkụda mmasị na egwuregwu dị otú ahụ. Onye inyeaka kachasị mma n'ịzụlite echiche nke ndị na-amụ akwụkwọ nwere ike ịbụ egwuregwu dị mfe "Cheedị na ị ..." .
Ụdị klas ndị a na-atụnye ụtụ na mmepe na ime ihe. Nye nwatakịrị ahụ, popu na-eche echiche okwu, ihe ọ ga-egosipụta. Ọrụ Mama bụ ịmara azịza ziri ezi. Emela ngwa ngwa na azịza ya, na-egosi na ọ gaghị ekwe omume idozi. Mgbe azịza ahụ gasịrị, ha na-eto nwa ahụ ma gbanwee ọrụ. Nke nta nke nta, egwuregwu maka mmepe nke ihe okike okike na ụmụ akwụkwọ ọta akara nwere ike ịdọta ndị ezinụlọ niile. Okwu a magburu onwe ya na-egosi ihe ndị a.
Egwuregwu maka mmepe echiche nke ụmụ akwụkwọ na-eto eto
N'ikwu banyere otu esi eche echiche na iche echiche nke nwatakịrị na-amụ akwụkwọ, ndị nkụzi na-ede ọrụ dị mkpa nke nne na nna na usoro a. Site na afọ 7-8, ụmụaka na-enweta ihe ọmụma zuru oke, nkà, nke ha ji arụ ọrụ rụọ ọrụ. Nwa ahụ nwere ọtụtụ ihe oyiyi, ya mere, ọrụ nke ndị okenye bụ ịmụta nchịkọta ziri ezi nke ha. N'okwu a, ụmụaka kwesịrị ịghọta otú o si eme n'eziokwu, na otu - ọ dịghị. Ịnagide ọrụ ndị yiri nke a na-enyere egwuregwu ahụ aka "Ọhịa Ebube" .
Na mpempe akwụkwọ a kwadebere n'ihu, a na-egosi osisi dị iche iche gburugburu ọnụ ọgụgụ buru ibu, ntụpọ na nhazi. Tupu nwa ahụ amalite ọrụ ahụ iji mee ka ọ ghọọ oke ohia. Mgbe foto a gwụsịrị, ị nwere ike ịnọgide na-arụ ọrụ na ya - jụọ ka ị gwa nwa ahụ ihe e sere onyinyo, mepụta akụkọ mkpirikpi. O nwere ike ịbụ ihe ziri ezi ma ọ bụ nke a na-ahụ anya (ọ bụ tupu oge eruo).
Egwuregwu maka mmepe echiche nke ụmụ akwụkwọ
Tupu ịmalite inwe echiche nke nwa akwụkwọ, ndị nne na nna kwesịrị ịmacha ihe omume ntụrụndụ ya. Nke a ga - enyere ya aka na egwuregwu ndị dị otú ahụ, iji mee ka mmekọrịta ya na ya ngwa ngwa. Maka klas na ụmụ nke 3-5 ọmụmụ ị nwere ike iji egwuregwu ndị a mepee echiche:
"Anu na-adighi." Ọ bụrụ na a hụrụ azụ, mgbe ahụ, ịdị adị nke azu azu nwekwara ike. A na-enye nwatakịrị ahụ ka o chee echiche ma kọwaa otú ihe a e kere eke si ele anya, ihe ọ na-azụ.
"Mee otu akụkọ." Tụlee foto dị iche iche n'ime akwụkwọ ahụ na nwa ahụ ma jụọ ya ka ọ kọọ akụkọ ya na-atọ ụtọ, ihe ọhụrụ. Ndị nne na nna kwesịrị itinye aka na nke a.
"Gaa n'ihu foto a." Ndị nne na nna na-egosipụta otu ọnụ ọgụgụ dị mfe, otu ọnụ ọgụgụ nke a ghaghị ịgbanwere n'ime akụkụ nke foto dị mgbagwoju anya. Site na gburugburu ha na-anọchite anya ihu, bọl, wiil nke ụgbọ ala. A na-enye nhọrọ ahụ n'aka.
Egwuregwu maka ichepụta echiche maka ụmụaka
Ọmụmụ ihe nwatakịrị ahụ bụ ogologo oge, gụnyere mgbanwe dị iche iche na mmemme. Ọ bụrụ na nwata ahụ anọwo ogologo oge, na-ele akwụkwọ ahụ anya, na-erugharị, ịkwesịrị inye ya ka ọ kpọọ ya na ihe mobile. Nke a ga-egbochi nrụgide, na ibu anụ ahụ ga-akwalite mmalite. Mgbe ezumike, ịnwere ike ịga n'ihu na ọmụmụ ihe gị.
Egwuregwu egwuregwu iji mepụta echiche
A na - anọchite anya egwuregwu na - ahụ maka egwuregwu na netwọk ahịa. Ma ọ dịghị mkpa ịzụta ihe. Ị nwere ike iche banyere egwuregwu n'onwe gị, na-eji ụzọ emezighị ihe:
Owuwu. Ụmụaka na-enwe mmasị iwu. Dị ka ihe nwere ike itinye onye mmepụta, ájá, alaka osisi.
Nlereanya. Ndị nne na nna na ụmụ nwere ike iji akwụkwọ na-ede akwụkwọ na ederede onwe ha, dee akwụkwọ ejiji maka nwa bebi.
Ịga egwuregwu iji zụlite echiche
Egwuregwu ndị dị egwu na mmepe nke nwa ahụ dị oke mkpa. Onye ọ bụla maara "Nchegbu oké osimiri ..." na-agafe site n'ọgbọ ruo n'ọgbọ, ọ dịghịkwa atụfu ya. N'ime egwuregwu ndị ọzọ:
"Nụrụ aha gị." Ụmụaka na-agbanye gburugburu, ha na-agbagharị onwe ha, onye ndú na-atụgharị bọl, na-akpọ aha onye ahụ. Nwatakịrị ahụ ga-agbanye ma jide bọl ahụ.
"Kangaroo." Ndị na-egwu egwuregwu na-agbanye ma na-atụgharị bọl n'etiti ụkwụ ha. Na mgbaàmà ha na-amalite ịwụ elu ruo n'isi, nke a setịpụrụ n'ebe dị anya nke 20-30 m. Ọ bụrụ na bọl ahụ dara, a na-ebuli ya ma na-aga n'ihu.
Akụkụ maka ụmụaka
Nwa ahụ na-atụ nna ya egwu - esi edozi nsogbu ahụ?
Ụmụaka sneakers na-ekpo ọkụ
Uwe mgbakwasị ụmụaka
Nlekọta nke onwe onye na agụmakwụkwọ
Ndị na-eme njem maka ụmụaka site n'afọ
Ntughari nke nwa akwụkwọ ụlọ akwụkwọ ọta akara - ndụmọdụ ndị nne na nna
Nzukọ nne na ndị okenye
Cubes nke Gienesh
Ngwá ọrụ site na plastic cover
Mmiri mmiri nnu
Igwe mmiri na-ekpo ọkụ
Ugbua maka ikuku mmiri
Ụbọchị ọmụmụ nke ụbọchị Miley Cyrus kwuru banyere onyinye mara mma site n'aka Liam Hemsworth, na-akpali mkparị nke ime ime ya
Njedebe nke azụmahịa: Jessica Alba dị njikere irefu ụlọ ọrụ ya dị oke egwu
Sansevera - lekọta
Sansevieria atọ ụzọ
Kedu esi mechie pipụ na mposi?
Aṅụ nke transgenic
Amber Hurd kwusara Johnny Depp ọzọ na ndị uwe ojii
Uwe onu ato
Ịzụ ahịa na Amsterdam
Ihe ngosi nka nke Mirador
Nwatakịrị anaghị ekwu okwu mgbe ọ dị afọ 3
Ntuchi aka na nwatakịrị afọ 3
Akpa maka ụmụaka dị afọ 12
Na-atụgharị uche n'àgwà mmadụ
Akpochapuru "osisi oak"
Cedar nut mmanụ - bara uru na ọgwụ Njirimara